Elsa Punset: iwo mabhuku atinokurudzira kuti iwe uverenge | Zvazvino Zvinyorwa
Elsa Punset: iwo mabhuku atinokurudzira
Encarni Arcoya | 30/04/2021 10:26 | dzakawanda
MuSpain, vashoma vanhu vanofarira mabhuku havasati vanzwa nezveElsa Punset. Mabhuku aanoburitsa anopera ekutanga edhisheni mumazuva kana mavhiki. Muchokwadi, tinogona kutaura zvakachengeteka kuti Elsa Punset ndemumwe wevanyori vane hunyanzvi mukufunga kwepamoyo muSpain, uye kunyangwe pasirese. Mabhuku ake, kusiyana nemamwe aungave wakaverenga, akaverengerwa seimwe yeakanakisa nekuti anodzidzisa, kwete zvakananga (uye zvisinganetsi) asi nemadimikira uye nenyaya dzinoitisa kuti umire kufunga uye unzwisise chii, kana iwe Vachitsanangura dzidziso, waisada handinzwisise.
Asi, Elsa Punset ndiani? Ndeapi mabhuku awakanyora? Pano tinojekesa kusahadzika kwese kwaungave uine.
1 Ndiani Elsa Punset
2 Elsa Punset: mabhuku akakosha
2.1 Elsa Punset mabhuku: Mugadheni shumba
2.2 Yakasimba, yakasununguka uye inofamba-famba: mazano ekurarama munguva dzinoshamisa
2.3 Bhuku reDiki Revolutions
2.4 Elsa Punset mabhuku: Bhegi rechisiko chose
2.5 Iwo maDaredevils mukutsvaga hupfumi
2.6 Elsa Punset mabhuku: Manheru akanaka, Bobiblú!
Ndiani Elsa Punset
Elsa Punset's biography inotitora kuenda kuLondon. Akazvarwa muma60, kunyanya muna 1964; Nekudaro, kunyangwe akazvarirwa imomo, akapedza hupenyu hwake muHaiti, United States neMadrid. Baba vake, Eduardo Punset, vaive mukurumbira anozivikanwa nesainzi uye zviri pachena kuti vakagara nhaka.
Muhupenyu hwake hwese vakapedza kudzidza muFilosofi neTsamba kubva kuYunivhesiti yeOxford, uye zvakare ane dhigirii raTenzi muHumanities, rimwe muRuzivo (iro rekupedzisira paYunivhesiti yeMadrid) uye chechitatu kuSecondary Education kubva kuCamilo José Cela University kuMadrid.
Basa rake rekunyora rakatanga nemabhuku Radical Innocence, Kompasi yevafambisi vengarava uye Bhegi rechisiko kumatenga (21 nzira dzekunzwa manzwiro edu). Pakati pavo vese, vaviri vekupedzisira ndivo vakabudirira kwazvo, kunyangwe Una bhegi para el Universo yakava yekutengesa zvakanyanya uye yakakwanisa kutengesa anopfuura 150000 makopi mune ese gumi edhisheni, kwete kuSpain chete, asiwo kunze kwenyika: Japan, Italy, Girisi, Mexico ...
En 2012 yakaparura bhuku rakanyanya kutarisisa kuvana, Iyo Bindu Shumba, nekubudirira kukuru. Muchokwadi, mu2015 akatanga muunganidzwa wenyaya dzakaratidzwa, dzinodaidzwa kuti "Los Arevidos", uye akatarisana nevana kuvabatsira kubata nemanzwiro avo. Nekudaro, iwe unogona kuwana manzwiro senge mufaro, kuzviremekedza, kusuwa, kutya, nezvimwe.
Rimwe remabhuku ake achangoburwa iri Bhuku reVadiki Revolutions, rakaburitswa muna2015 iro raive pane asiri-ngano anotengesa zvakanyanya zvinyorwa zvemwedzi Pari zvino, yakaburitsa Yakasimba, Yemahara uye yeNomads: Zvirongwa zvekurarama muNguva Dzinoshamisa.
Pamusoro pekuve munyori, Elsa Punset akashandawo muzvirongwa zveterevhizheni, senge El Hormiguero (2010), Redes (2012), kana La Mirada de Elsa, chikamu cheiyo yepasi rese chiteshi cheTV chakabata nezvekusimudzira wega.
Elsa Punset: mabhuku akakosha
Kutaura newe pano nezve ese eElsa Punset mabhuku angave anofinha zvakanyanya, uyezve iwe waizoneta isu kukupa iwe rimwe zita mushure meimwe. Mukupedzisira, iwe unokanganwa chekare uye unongo rangarira kwekupedzisira.
Uye, kunyangwe pasina mazita mazhinji nemunyori, mamwe anogona kunge ari nani pane mamwe, zvese nekuda kwemaonero evaverengi uye nekuti tinoona sekuti anokodzera kuverenga pane imwe nguva muhupenyu. Iwe unoda here kuziva izvo zvavari? Nyatso cherekedza:
Elsa Punset mabhuku: Mugadheni shumba
Isu tinotanga nebhuku revana iro, munotenda kana kwete, rinovanza kudzidza kukuru. Nhoroondo inotiudza shumba inoshamwaridzana neshiri sei? zvose zvinodzivirirana nekuti shumba inochengeta tsoko nenyoka, zvichidzivirira shiri; uye izvi zvinozobvisa zvikwekwe pashumba.
Asi ko kana shumba ikakuudza chimwe chezvakavanzika zvakanyanya chaasina kuda kuudza chero munhu?
Yakasimba, yakasununguka uye inofamba-famba: mazano ekurarama munguva dzinoshamisa
Iri bhuku nderimwe rekupedzisira rakaburitswa naElsa Punset. Mariri, anotsvaga kubatsira vanhu vanoona kuti pane shanduko muhupenyu hwavo, munzira yavo yekurondedzera, yekushanda ... uye anoedza shanda senongedzo yekugadzirisa kusagadzikana uye kushandura iye munhu werudzi rwemagariro atinawo izvozvi.
Bhuku risina kushata kuverenga nekuti zvirokwazvo unoona pamwe nemamwe mamiriro anotsanangurwa mariri.
Bhuku reDiki Revolutions
Sekutaura kunoita bhuku, kana uine nzara, iwe unoziva zvekuita. Kana aine nyota, zvimwe chete. Asi, Chii chinoitika kana takasuruvara, takaodzwa mwoyo ...? Nguva zhinji hatizive kuti toita sei nemanzwiro iwayo uye izvo zvinoita kuti tisafare.
Naizvozvo, pano munyori anoedza kukubatsira iwe kuti uzive maitiro emhando dzemafungiro, senge kushushikana, kusava netariro, nharaunda dzine chepfu, kutya, kutsamwa kana chimwe chinhu chikatikurira, nezvimwe.
Elsa Punset mabhuku: Bhegi rechisiko chose
Mariri iwe unowana mibvunzo yakawanda iyo, pane imwe nguva muhupenyu hwako, iwe waakakwanisa kuzvibvunza pachako. Semuyenzaniso, Unoziva nei tichiitira shanje? Nei tichida shamwari kuti tifare? Kana nei tichichema? Mibvunzo yezuva nezuva, iyo mhando yatinobata nayo zuva nezuva, uye zvakadaro isu hatizive kuti mhinduro dzinogona kuita hupenyu kuve nani.
Iwo maDaredevils mukutsvaga hupfumi
Iri bhuku nderechipiri muunganidzwa weLos Atrevidos, uye isu tasarudza iro nekuti imwe yemanzwiro ainoita nayo kuzviremekedza. Vana vazhinji vanotadza kusava nacho, kana kuchiderera, izvo zvinoita kuti vafunge kuti hapana chavanokwanisa kuita. Cast inokonzeresa mweya yavo uye simba rekutarisana nezuva ravo zuva nezuva: zvidzidzo, hushamwari, nezvimwe. Neichi chikonzero, Elsa Punset uye bhuku rino vanotsvaga kupa vabereki, uye zvakare vana, zviwanikwa zvekuvandudza kuzvidzora kwevana uye ungwaru hwepamoyo.
Elsa Punset mabhuku: Manheru akanaka, Bobiblú!
Iri bhuku chikamu cheunganidzo nyowani yevana iyo Elsa Punset yakaburitsa yemabhuku akatarisana nevadiki. Mariri tinowana "imbwa" uye mwana, vari nyama neropa, kusvika pakuti munhu wese anovadaidza kuti Bobiblú.
Iri bhuku rei? Zvakanaka batsira vadiki kubata mamwe emanzwiro avo, kana nemaitiro, senge mune ino kesi, kuenda kunorara.
Iye zvino yave nguva yako yekuona mabhuku aunonyanya kufarira kana ayo akachinja hupenyu hwako naElsa Punset. Chokwadi aripo!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Elsa Punset: iwo mabhuku atinokurudzira